January 2016 | Language Century Language Century
Verb နောက်မှာ Verb တွဲအုံးမယ်။
3:58 PM English , Grade-11
ဒီလိုတွဲစပ်ပုံလေးတွေကို ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့ လေ့လာထားကြပါ။ အရမ်း အသုံးဝင်တယ်နော်။
I. Verb + (to+V1)
အောက်ပါ Verb(ကြိယာ)များ၏နောက်တွင် to + V1 လိုက်သည်။
want - ချင်သည်။
hope - မျှော်လင့်သည်။
plan - စီစဉ်သည်။
decide - ဆုံးဖြတ်သည်။
need - လိုအပ်သည်။
expect - မျှော်မှန်းသည်။
promise - ကတိပြုသည်။
offer - ပေးစွမ်းသည်။ ကမ်းလှမ်းသည်။
refuse - ငြင်းပယ်သည်။
try - ကြိုးစားသည်။
forget - မေ့လျော့သည်။
learn - သင်ယူသည်။
e.g. Where do you want to go?
သိပ်နောက်ကျသေးပါဘူး။ ငါတို့ အိမ်ပြန်ဖို့ မလိုသေးဘူး။
II. Verb + (Ving)
အောက်ပါ Verb(ကြိယာ)များ၏နောက်တွင် Ving ကိုရေးရသည်။
enjoy - ပျော်ရွှင်နှစ်သက်သည်။
stop - ရပ်တန့်သည်။
mind - စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်။
finish - ပြီးစီးသည်။
suggest - အကြံပြုသည်။
e.g. I enjoy cycling.
ငါ စက်ဘီးစီးရတာ ပျော်တယ်။
III. V + (to+V1) or (Ving)
အောက်ပါ Verb(ကြိယာ)များ၏နောက်တွင် to+V1 (သို့) Ving ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို သုံးနိုင်သည်။
like - ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
love - ချစ်သည်။
prefer _ ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
hate - မုန်းသည်။
start - စတင်သည်။
begin - အစပြုသည်။
continue - ဆက်လုပ်သည်။
e.g. Do you like getting up early? (or) Do you like to get up early?
ခင်ဗျား အိပ်ရာကစောစောထရတာ ကြိုက်လား။
For more information - English for all
3:49 PM E-Sentence , English
တစ်ယောက်ယောက်ကို လှမ်းနှုတ်ဆက်ပြီးရင် ဒီလိုလေးတွေ ပြောတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့ လိုမယ်နော်။
For more information- English for all
မျှော်လင့်မထားဘဲ ရုတ်တရက်ကြီး ပက်ပင်းတိုးတော့။
3:37 PM E-Sentence , English
မျှော်လင့်မထားတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်တဲ့အခါ သင်အံ့သြသွားမှာပေါ့နော်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြောနိုင်အောင် ဒီလိုလေးတွေ ကျက်ထားပေတော့။
ကွဲကွာနေတဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ။
3:28 PM E-Sentence , English
Greetingaperson you haven't seen inalong time
3. I haven't seen you in an age.
4. I haven't seen you inamonth of Sundays.
(a month of Sundays =along time)
3:22 PM E-Sentence , English
မနက်ခင်းကနေ ညနေမိုးချုပ်ချိန်အထိ နှုတ်ဆက်ကြပုံတွေကတော့ ဟောဒီလိုတဲ့ဗျာ။
Greetings for various time of the day
4. How are you this bright morning?
7. Good evening.
3:10 PM E-Sentence , English
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့ နှုတ်ဆက်ပုံနှုတ်ဆက်နည်းတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပေးလိုက်ကြောင်းပါ။
6. Yo! (slang)
နှုတ်ဆက်ပုံ၊ နှုတ်ဆက်နည်း အမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်နော်။
4:31 PM E-Sentence , English
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးပါ။ သင်လည်း ဒီလိုလေးတွေ ပြောကြည့်ပေါ့နော။
3. How's it been?
6. How you been?
7. How's tricks?
11.What s happening?
12.What's going on?
အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝါကျတိုများ။
4:18 PM C-Sentence , Chinese
အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုချင်တဲ့အခါ ဒီလိုလေးတွေ ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း လေ့လာထားကြပါအုံးနော်။
Nǐ yǒu duōshao běnqiǎn?
နီးယို တောရှောင်h ပဲင်ချန်
မင်းမှာ အရင်းအနှီး ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
Nǐ huì zuò shēngyi ma?
Shéi shì diànzhǔ?
ရှေh ရှစ်h တျန့်ကျူh
Tā shì diànyuán?
ထား ရှစ်h တျန့်ယွမ်
Yí gè yuè wǔwàn.
တစ်လ ၅၀၀၀၀ ပါ။
အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဝါကတြိုမြား။
အလုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောဆိုခငျြတဲ့အခါ ဒီလိုလေးတှေ ပွောလရှေိ့ကွတယျ။ မိတျဆှတေို့လညျး လလေ့ာထားကွပါအုံးနျော။
နီးယို တောရှောငျh ပဲငျခနျြ
မငျးမှာ အရငျးအနှီး ဘယျလောကျရှိလဲ။
ရှေh ရှဈh တနျြ့ကြူh
ထား ရှဈh တနျြ့ယှမျ
တဈလ ၅၀၀၀၀ ပါ။
SUPERMOON ECLIPSE - ဧရာမ လကြတ်ခြင်း။
4:24 PM E-everenglish , English
Hey, do you know 'Supermoon Eclipse'? What kind of moon & what kind of eclipse? See you on the supermoon!!!
ovember လထုတ် Ever English Magazine No. 24 စာမျက်နှာ 33 ပါ Supermoon Eclipse နှင့်တွဲ၍ လေ့ကျင့်နိုင်သော video File ကို download ဆွဲယူနိုင်ပါသည်။
Video (11) Supermoon Eclipse.mpg
For More Information - Ever English Magazine
A trip abroad & mother's health
4:06 PM E-everenglish , E-Letter Writing , English
November လထုတ် Ever English Magazine No. 24 စာမျက်နှာ 37ပါ Writealetter to your friend about your trip toaforeign country and your mother's health. ဆောင်းပါးနှင့်တွဲ၍ လေ့ကျင့်နိုင်သော Audio File ကို download ဆွဲယူနိုင်ပါသည်။
a trip abroad & mother's health.mp3
ခရစ္စမတ် အီဒီယမ် အသုံးအနှုန်းများ။
3:50 PM E-everenglish , E-Idiom , English
အမိုက်စား ရာသီစာဆောင်းပါးလေး Ever English Magazine with DVD, No. 25, Dec ထဲက Christmas Idioms ဆောင်းပါးလေးပါ။ ပွဲတော်နေ့၊ ပွဲတော်အခါသမယမှာ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်း။ VOA Burmese Site ထဲက Christmas စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို ၀င်ပြီး download ဆွဲ နားထောင်ပေးပါ။
သင့်အသည်း ခွဲခဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်လိုက်စမ်းပါ။
2:59 PM E-everenglish , English
Christmas ည အထူးလက်ဆောင်လေး heart emoticon
သင့်အသည်း ခွဲခဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်လိုက်စမ်းပါ
smile emoticon Be Thankful To The Person Who Broke Your Heart cry emoticon
By Max Olivares
They taught us to see that one of the greatest gifts of being alive is the ability to give, receive and even lose love.
2:41 PM E-everenglish , English
မသေခင် အရောက်သွားပေး၊ ဖတ်စာအုပ်ထဲက နေရာလေး heart emoticon
Ever English Magazine with DVD, No. 25, Dec ထဲက "လန်ကာဝီကျွန်းမှာ တစ်မိနစ်တာ" Travel in Malaysia - Exploring the Langkawi Islands သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု ဗီဒီယိုဆောင်းပါးလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်မိနစ် အချိန်ပေးရုံလေးနဲ့ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာလည်း ရောက်၊ ဝေါဟာရလည်း တိုး၊ ဗဟုသုတလည်း ပွား၊ Listening & Pronunciation လည်း လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။ မကြာခင် အမြစ်ကနေ လှန်ပစ်တော့မယ့် စနစ်သစ်ပညာရေးအတွက် ကြိုပြင်ပေးထားတာနော်။ မပြင်ချင်၊ မပြောင်းချင်သူတွေကတော့ ထမင်းငတ်ပြီး တခြားရရာအလုပ် ပြောင်းလုပ်ကြပေရော့။
For more information : Ever English Magazine
ကျွန်တော့် သည်းခြေကြိုက် ၀ါသနာ။
2:30 PM E-essay , E-everenglish , English
My Favorite Pastime လို့ မေးရင် တချို့ကျောင်းသားတွေ မဖြေတတ်ကြပါဘူး။ Pastime ကို Hobby မှန်း မသိကြလို့ပါတဲ့။ ဟောဒီမှာ online essay ကောင်းတစ်ပုဒ် အမြည်းပေးလိုက်တယ်။ ကူးချ ခိုးချ အလွတ်ကျက်ဖို့မဟုတ် နည်းမှီတုပ အတွေးကျင့်၊ အရေးကျင့်နိုင်ဖို့နော်။
Personal Pronouns အကြောင်း လေ့လာခြင်း။
2:05 PM E-Grammar , English
1) Possessive Adjective ၏ နောက်တွင် one မသုံးရ။
E.g – I parked my car next to hers. (X)
I parked my car next to her one. (√)
2) Its နှင့် It’s ကွာခြားချက်။
- Its သည် Possessive Adjective ဖြစ်သည်။
E.g – Rose is very beautiful. Its smell is romantics.
- It’s သည် It is ၏ အတိုကောက် ဖြစ်သည်။
E.g – This isaflower. It isarose.
This isaflower. It’sarose.
3) Subject တစ်ခုနှင့် I တွဲသုံးသောအခါတွင် and I ကိုနောက်တွင်ထား၍ သုံးရသည်။
E.g – You and I like apple.
Smith and I love dog.
4) Object တစ်ခုနှင့် me တွဲသုံးသောအခါတွင် and me ကိုနောက်တွင်ထား၍ သုံးရသည်။
E.g – Rose invited you and me to her wedding.
The dog barks Marry and me.
Posted by - Rose Catherine
ဆင်ကြီးကြီး ကြိုးသေးသေး - The Elephant Rope
8:34 AM E-everenglish , English
၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လသာ အမိုက်စားဇာတ်လမ်းပါ။
Ever English Magazine with DVD No. 25 Dec ကနေ ယူပါတယ်။
Possessive Case အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ။
4:26 PM E-Grammar , English
1) လူအနည်း၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း နှင့် တော်စပ်မှုကို ဖော်ပြရာတွင် ‘s သုံးသည်။
E.g – the girl’s jackets
– My aunt’s friend
2) လူအများ၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖော်ပြရာတွင် s’ သုံးသည်။
E.g – the girls’ jackets
– The children’s nanny (အများ children ဖြစ်သောကြောင့် ‘s သုံးရသည်။)
3) အပင်၊ နေရာ၊ အရာဝတ္တုများ၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖော်ပြရာတွင် of သုံးသည်။
E.g – the branches of the tree
– The manager of the factory
– The door of the car
Countable Noun and Uncountable Noun Part (2)
4:19 PM E-Grammar , English
၇) News is Uncountable Noun ဖြစ်သည်။ အများကိန်း မဟုတ်ပါ။
E.g The news is very depressing.
၈) အစုံတစ်စုံ ကိုရေးသောအခါ verb သည်အနည်းကိန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်apair of နှင့်တွဲရေးသောအခါ verb သည်အများကိန်းဖြစ်သည်။
E.g My trouser is too long.
I want to buyanew pair of trousers.
၉) ပိုက်ဆံစုစုပေါင်း၊ အချိန်၊ အကွာအဝေး များကိုရေးသောအခါ verb သည်အနည်းကိန်းဖြစ်သည်။
E.g Ten miles isalong way to walk every day.
၁၀) noun + noun နှင့်လည်း တွဲရေးနိုင်သည်။
E.gatennis ball,abank manger, income tax
a sugar bowl (အလွတ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။),abowl of sugar = ခွက်ထဲတွင် သကြားရှိသည်။
၁၁) noun + nounကို ခွဲမရေးဘဲ တွဲရေး၍ရသည်။
E.gaheadache, toothpaste,aweekend
4:11 PM E-Word , English
“ကြော်ငြာ”နှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရအမျိုးမျိုးကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
advertisement - ကြော်ငြာ
layout - ကြော်ငြာရေးဆွဲပုံ
commercial broadcasting programme - ကြော်ငြာအစီအစဉ်
bagstuffer - လက်ကမ်းကြော်ငြာစာ
promotional literature - ကြော်ငြာစာပေ၊ ကြော်ငြာပုံနှိပ်စာအုပ်စာတမ်း
advertising agent - ကြော်ငြာအကျိုးဆောင်၊ ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ်
advertisement design - ကြော်ငြာဒီဇိုင်း
advertising mail matter - ကြော်ငြာချောစာ
form of advertisement - ကြော်ငြာပုံစံ
advertising agency, advertising firm - ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ၊ ကြော်ငြာအေဂျင်စီ၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း
advertising - ကြော်ငြာသည်
poster - နံရံကပ်ကြော်ငြာ၊ ကြော်ငြာကားချပ်၊ ပိုစတာ
advertisement column - ကြော်ငြာကဏ္ဍ
billboard, advertisement sign - ကြော်ငြာချပ်
advertising fee - ကြော်ငြာစရိတ်၊ ကြော်ငြာခ
advertising war - ကြော်ငြာစစ်ပွဲ
full-page advertisement - စာမျက်နှာပြည့်ကြော်ငြာ
classified advertisement - အမျိုးအစားလိုက်ကြော်ငြာ
sales promoting advertisement - ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန်ကြော်ငြာ
newspaper advertising - သတင်းစာကြော်ငြာ
advertising on TV - ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ
wireless advertising, advertising on radio - ရေဒီယိုကြော်ငြာ
cinema film advertising - ရုပ်ရှင်ကားကြော်ငြာ
commercial advertising - ကုန်သွယ်မှုကြော်ငြာ၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းကြော်ငြာ
magazine advertisement - မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာ
ငါ မင်းကို သူဌေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်။
6:58 PM E-Dialogue , English
အခြားသူတစ်ဦးကို မိမိကုမ္ပဏီရဲ့ သူဌေးအကြောင်းပြောဆို မိတ်ဆက်ပုံလေးကို လေ့လာရအောင်။
B: He is our boss.
သူက ငါတို့ သူဌေးပါ။
A: What is his family name?
သူ့ရဲ့ မိသားစုနာမည်က ဘာလဲ။
B: We don't know his surname. We call him Mr Martin.
ငါတို့က သူ့မိသားစုနာမည်ကို မသိဘူး။ ငါတို့ သူ့ကို မစ္စတာ-မာတင် လို့ ခေါ်တယ်။
A: Where does Mr Martin come from?
B: He is an American.
A: Does he speak Chinese?
သူ တရုတ်စကား ပြောတတ်လား။
B: Yes. He knows many languages. He can speak Chinese, Japanese, German and French.
ဟုတ်တယ်။ သူ ဘာသာစကားတွေ အများကြီးတတ်တယ်။ သူက တရုတ်စကား၊ ဂျပန်စကား၊ ဂျာမန်စကားနဲ့ ပြင်သစ်စကားတွေ ပြောနိုင်တယ်။
For more information - LC.Apk
“ဈေး” ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
6:41 PM E-Word , English
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အခါမှာ ဝေါဟာရများများသိထားခြင်းဟာလည်း သင့်အတွက် အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဈေးကွက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရများကို လေ့လာကြပါစို့။
market - ဈေး၊ ဈေးကွက်
flea market - အသုံးပြုပြီးပစ္စည်းဟောင်းများ ပြန်ရောင်းသော လေဟာပြင်ဈေး
junk market - တပတ်နွမ်းဈေး၊ တပတ်ရစ်ပစ္စည်းရောင်းဈေး
retail market - လက်လီဈေးကွက်
wholesale market -လက်ကားဈေးကွက်
free market -လွတ်လပ်ဈေးကွက်
open-air market - လေဟာပြင်ဈေးကွက်
auction - လေလံတင်၊ လေလံပစ်သည်
foreign exchange market - နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်
small market, bazaar - ဈေးငယ်၊ ပွဲဈေး
fresh market, new market - ဈေးကွက်သစ်
supermarket - စူပါမားကက်
home market, domestic market - ပြည်တွင်းဈေးကွက်
option market - ရက်ချိန်းအပ်ကုန်ဈေးကွက်
stock market - စတော့ဈေးကွက်
spot market -လက်ငင်းအပ်ပေးသောကုန်ဈေးကွက်
Pray ......... Justin Bieber
6:12 PM E-Songs , English
အင်္ဂလိပ်သီချင်း ကြိုက်နှစ်သက်သူများ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာနေသူများအတွက် ဒီနေ့ တင်ပေးလိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အရမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး နားထောင်လို့လည်း ကောင်းပါတယ်။
သီချင်းကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
N4 Kanji လေ့လာမယ်ဆိုရင် သူရှိမှ အဆင်ပြေမှာနော်။
5:40 PM J-Apps , Japanese
ဂျပန်ဘာသာစကား လေ့လာနေကြသူများအတွက် အသုံးတည့်နိုင်သလို၊ သံရုံးစာမေးပွဲ N4 Levelကို ဖြေဆိုကြမယ့်သူများအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီ Apkလေးကို ဒေါင်းပြီး ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်တော့နော်။
Apkကို ဒေါင်းရန် ဒီမှာ Click နှိပ်လိုက်ပါ။
တရုတ်အသံထွက်အကြောင်း အခြေခံ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ။
5:11 PM C-Pinyin , Chinese
တရုတ်ဘာသာစကားကို လေ့လာကြသူများအနေဖြင့် သတိပြုစရာတစ်ချက်မှာ အသံထွက်ပိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်ဘာသာစကားကို လေ့လာသည်ဖြစ်စေ အသံထွက်ကို ပိုင်နိုင်မှသာ မိမိပြောဆိုလိုသော အကြောင်းအရာ၊ အဓိပ္ပာယ်ကို ထိရောက်စွာပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှုရှိလာပါလိမ့်မည်။ တရုတ်ဘာသာ အသံထွက်စနစ်ကို Pinyin (ဖျင်းယင်း)ဟု ခေါ်ပါသည်။
တရုတ်ဘာသာရှိ အသံထွက်စနစ်ကို စတင်လေ့လာကြပါစို့။
ဗျည်းသံ (၂၁) လုံး။
1.bပ ㄅ
2. p ဖ ㄆ
3. m မ ㄇ
4.fဖf ㄈ
5.dတ ㄉ
6. t ထ ㄊ
7. n န ㄋ
8. l လ ㄌ
9. g က ㄍ
10. k ခ ㄎ
11. h ဟ ㄏ
12. j ကျ ㄐ
13. q ချ ㄑ
14. x ရှ ㄒ
15. zh ကျh (လျှာလိပ်) ㄓ
16. ch ချh (လျှာလိပ်) ㄔ
17. sh ရှh (လျှာလိပ်) ㄕ
18. r ရr (လျှာလိပ်) ㄖ
19. z ဇစ်z (ရှေ့သွား+လျှာ) ㄗ
20. c ဆစ် (ရှေ့သွား+လျှာ) ㄘ
21. s စစ် (လျှာဖျား) ム
b ပေါ် p ဖော် m မော်fဖော်f
d တဲယ် t ထဲယ် n နဲယ် l လဲယ်
g ကဲယ် k ခဲယ် h ဟဲယ်
j ကျီ q ချီ x ရှီ
zh ကျီh ch ချီh sh ရှီh r ရွတ်r
z ဇစ်z c ဆစ် s စစ်
သူပြောတာ ကိုယ်နားမလည်ရင် ဒီလိုပြောပေါ့။
4:38 PM C-Sentence , Chinese
တဖက်သားပြောတာကို နားမလည်တဲ့အချိန်မှာ တုံ့ပြန်ပြောဆိုပုံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ စာကြောင်းလေးတွေမို့ လေ့လာကျက်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
၁။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည်းဖြည်းပြောပါ။
ချင်း(င်)နီ မန့်မန့် ရှောh
Qǐng nǐ mànman shuō.
၂။ မင်းပြောတာ အရမ်း မြန်တယ်။
နီ ရှောhတဲ့ ဟဲင်ခွိုက်
Nǐ shuō de hěn kuài.
၃။ ငါ သိပ်နားမလည်ဘူး။
ဝေါ် ပူထိုက် တုံ(င်)
Wǒ bú tài dǒng.
၄။ ငါ သိပ်မရှင်းဘူး။
ဝေါ် ပူထိုက် ချင်း(င်)ချုh
Wǒ bú tài qīngchu.
၅။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါ။
ချင်း(င်)နီ ဇိုက်zရှောh ယီပြန့်
Qǐng nǐ zài shuō yíbiàn .
★ လေ့လာရန် ဝေါဟာရများ
ကျေးဇူးပြု၍ - ချင်(င်)
ဖြည်းသော၊ နှေးသော - မန့်
ပြောသည် - ရှောh
… တာ - တဲ့
အရမ်း - ဟဲင်
မြန်သော - ခွိုက်
သိပ်မ … - ပူထိုက်
bú tài 不太
နားလည်သည် - တုံ(င်)
ရှင်းလင်းသည် - ချင်း(င်)ချုh
နောက်ထပ် - ဇိုက်z
တစ်ခေါက် - ယီပြန့်
yí biàn 一遍
သူပွောတာ ကိုယျနားမလညျရငျ ဒီလိုပွောပေါ့။
တဖကျသားပွောတာကို နားမလညျတဲ့အခြိနျမှာ တုံ့ပွနျပွောဆိုပုံမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ အသုံးဝငျတဲ့ စာကွောငျးလေးတှမေို့ လလေ့ာကကျြမှတျထားသငျ့ပါတယျ။
၁။ ကြေးဇူးပွု၍ ဖွညျးဖွညျးပွောပါ။
ခငျြး(ငျ)နီ မနျ့မနျ့ ရှောh
၂။ မငျးပွောတာ အရမျး မွနျတယျ။
နီ ရှောhတဲ့ ဟဲငျခှိုကျ
၃။ ငါ သိပျနားမလညျဘူး။
ဝျေါ ပူထိုကျ တုံ(ငျ)
၄။ ငါ သိပျမရှငျးဘူး။
ဝျေါ ပူထိုကျ ခငျြး(ငျ)ခြုh
၅။ ကြေးဇူးပွု၍ တဈခေါကျပွနျပွောပါ။
ခငျြး(ငျ)နီ ဇိုကျzရှောh ယီပွနျ့
★ လလေ့ာရနျ ဝေါဟာရမြား
ကြေးဇူးပွု၍ - ခငျြ(ငျ)
ဖွညျးသော၊ နှေးသော - မနျ့
ပွောသညျ - ရှောh
အရမျး - ဟဲငျ
မွနျသော - ခှိုကျ
သိပျမ … - ပူထိုကျ
နားလညျသညျ - တုံ(ငျ)
ရှငျးလငျးသညျ - ခငျြး(ငျ)ခြုh
နောကျထပျ - ဇိုကျz
တဈခေါကျ - ယီပွနျ့
Speaking for IELTS စာအုပ် သင်လိုအပ်ပါသလား။
4:20 PM E-ebook , English
IELTS ဖြေဆိုမယ့် ကျောင်းသားများအတွက် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ။ လေ့လာသူများ အဆင်ပြေကြပါစေ။
ဒီနေရာမှာ click နှိပ်ပါ။
上　を　向　い　て　歩　こ　う
4:00 PM J-Songs , Japanese
ဂျပန်သံစဉ်သီချင်းများကို နားထောင်ချင်သူများ၊ ဂျပန်ဘာသာစကား လေ့လာနေသူများအတွက် သီချင်းကောင်းလေးများကို အမြဲမပြတ် လွှင့်တင်ပေးနေပါပြီ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
American English Conversation စာအုပ် ရပြီနော်။
3:21 PM E-Apps , English
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာသူများအတွက် အသုံးပြုလို့ကောင်းမယ့် မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
၂၁-ရာစု တရုတ်သဒ္ဒါစာအုပ် download ရယူရန်။
4:24 PM C-ebook , Chinese
သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အလွယ်တကူဖတ်ရှုလို့ရတဲ့ pdf စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ။ တရုတ်စကားလေ့လာသူများအတွက် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းရှိရုံနဲ့ ဘာသာစကားတွေကို အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ကြပါပြီ။
ဒီမှာ Click နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။
လို-တို-ရှင်း တရုတ်စကားပြောစာအုပ် + CD
4:13 PM C-Advertisement , Chinese
တရုတ်ဘာသာစကားကို သင်လေ့လာနေပါသလား။ စကားပြောစာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတစ်အုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဆရာစိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်(တရုတ်ဘာသာနည်းပြ) ရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့ စကားပြောစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀ထဲမှာ ပြောကြဆိုကြပုံတွေကို လိုတိုရှင်းပုံစံ ၀ါကျတိုလေးတွေနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။ mp3-CD ပါဝင်ပါတယ်။
လို-တို-ရှင်း တရုတ်စကားပြော + CD
Tel: 09-877-0096, 09-730-40610
Uncountable Noun အကြောင်း သိကောင်းစရာများ။
4:21 PM E-Grammar , English
2) Uncountable noun
a) အများကိန်းအဖြစ် မသုံးပါ။ တစ်ခုကိန်း အဖြစ်သာ အသုံးပြုကြသည်။
E.g. They give usalot of advice. (not advices)
b) a/an နှင့်လည်း တွဲသုံးလေ့မရှိပါ။ သို့သော် တစ်ချို့သော Quantifier (ပမာဏပြသည့် စကားလုံး)များနှင့် တွဲသုံးနိုင်သည်။
E.g. He gave me some useful advice.
c) တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရေတွက်၍ရသည်ဟု ထင်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် ရေတွက်၍ မရသော နာမ်ဖြစ်နေတတ်သည်။
E.g Homework, Knowledge, News, Information, Advice, Equipment, Furniture Machinery, Baggage, Luggage, Traffic, Money
d) ၄င်းတို့ကို အရေအတွက်ဖြင့် သုံးချင်ပါက အောက်ပါတို့နှင့် တွဲသုံးနိုင်သည်။
E.g. Let me give youapiece of advice.
My father gives me pieces of advice every day.
Minna no Nihongo Quiz Lesson-1
4:00 PM J-Quiz , Japanese
ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာနေကြသူများအတွက် Minna no Nihongo စာအုပ်ကို သင်ယူတဲ့အခါ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီမှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများကို အလွယ်တကူကျက်မှတ်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ (A, B, C, D) အဖြေလေးမျိုးထဲက မှန်ကန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ဝေါဟာရမှတ်သားနိုင်စွမ်းဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အံ့မခန်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုပဲ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
Min na no Nihongo - Lesson (1) - Quiz - Part (1)
သင်၏ အဖြေများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
阿 里 山 的 姑 娘
စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာပြောတာ နားလည်အောင် ။
“Nouns - နာမ် ” အကြောင်း လေ့လာခြင်း။
N5 လေ့လာသူများအတွက် ခန်းဂျိ-107　国
ဂျပန်စာလုံး(hiragana) ရေးသားနည်း - sa, shi, su, se...
ဂျပန်စာလုံး(hiragana) ရေးသားနည်း - ka, ki, ku, ke, ko
“ံHave/Get” အကြောင်း လေ့လာကြစို့။
“Going to” အကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များ။
Article : A, An, The (Part-5)
Article: A, An, The (Part-4)
Article : A, An, The (part-3)
စာရိုက်ရင် အမှားမပါအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
မိသားစုဝင်များကို ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောမှာလဲ ။
ဂျပန်စကား လေ့လာသူများအတွက် မသိမဖြစ် ဝေါဟာရများ။
တနင်္ဂနွေနေ့ သင် ဘာလုပ်သလဲ။
Article: A, An, The (Part 2)
နေ့စဉ်သုံးစာလုံးများ (我，你，他...)ကို ဘယ်လိုရေးမလဲ။
တရုတ်စာလုံး (၁-မှ ၁၀-ထိ) ရေးပုံရေးနည်းများ ။
နိုင်ငံ၊ လူမျိုးနှင့် အလုပ်အကိုင်အကြောင်း။
Article : A, An, The (Part 1)
စတင်ရင်းနှီးချိန်မှာ ပြောမယ့် စကားများ။
သူတပါးအတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးကြပါစို့။
Simple Present Tense အကြောင်း လေ့လာကြစို့။
တောင်ပြုံးပွဲတော်ကို သင်ရောက်ဖူးပါသလား ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးအကြောင်း ။
ဖုန်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်း ။
ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်း ။
ဘုရင်ခေတ်၊ နန်းတွင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ။
ဂျပန်စာလုံး (hiragana) ရေးသားနည်း -ai ueo
ဂျပန် စကားပြော ၀ါကျတိုများ- စတင်နှုတ်ဆက်ခြင်း။